Chautari Daily » कोरोना भाइरसबाट कुन देशमा कति जनाको ज्यान गयो ? यस्तो छ तथ्यांक
कोरोना भाइरसबाट कुन देशमा कति जनाको ज्यान गयो ? यस्तो छ तथ्यांक
काठमाडाैं, ५ चैत्र / कोरोना भाइरस अर्थत् कोभिड १९ को संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या झण्डै ८ हजार पुगेकाे छ । काेराेना सम्बन्धित तथ्याङ्क निकाल्ने संस्था वर्ल्डो मिटरर्स डट इन्फोका अनुसार याे समाचार तयार पारिसक्दासम्म काेराेना भाइरसबाट मृत्यु हुनेकाे संख्या ७ हजार ९८७ पुगेकाे छ ।
अहिलेसम्म एक लाख ९८ हजार भन्दा बढीम काेराेनाबाट संक्रमित भएका छन् । सङ्क्रमण देखिएका १ लाख ९८ हजार ४२२ मध्ये ८२ हजार ७६२ उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने उपचार गराइरहेका ६ हजार ४१५ जनाकाे अवस्था गम्भीर छ ।
काराेना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी मर्ने र संक्रमित हुने देशमा चीन पहिलाे नम्बरमा अाउछ । अहिलेसम्म चीनमा ३ हजार २३७ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने ८० हजार ८९४ जनामा संक्रमण देखा परेकाे छ । ८० हजार ८९४ मध्ये ६९ हजार ६१४ जना भने पूर्ण रूपमा निकाे भइसेका छन् ।
काेराेनाकाे सङ्क्रमणबाट चीनपछि सबैभन्दा धेरै इटालीमा मृत्यु भएको छ । हालसम्म इटालीमा २ हजार ५०३ जनाकाे ज्यान गइसकेकाे छ । पछिल्लो समय इटालीमा काेराेनाकाे संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाे पाइन्छ । २४ घण्टामा मात्रै ३४५ जनाको मृत्यु भएको छ भने थप ३ हजार ५ सय २६ मा संक्रमण देखिएको छ ।
काेराेना भाइरसकाे बढी मृत्यु र संक्रमण भएकाे देशकाे तेस्राे नम्बरमा इरान र चाैथाे नम्बरमा स्पेन पर्छ । अहिलेसम्म इरानमा ९८८ मृत्यु भएकाे छ भने १६ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । त्यस्तै स्पेनमा अहिलेसम्म ५३३ काे मृत्यु भएकाे भने ११ हजार ८ सयभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् ।
२४ घण्टामा ८२६ जनाकाे मृत्यु
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमण अहिलेसम्म एक सय ६५ देशमा फैलिएकाे छ । उद्गम स्थल चीनमा नियन्त्रण हुँदै गइरहेको बेला चीनबाहिर भने तीव्र रुपमा फैलिरहेको छ ।
पछिल्लाे २४ घण्टामा काेराेना भाइरसबाट ८२६ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने १५ हजार ९३२ जनामा नयाँ संक्रमण भएकाे छ ।
वर्ल्डो मिटरर्स डट इन्फोका अनुसार पछिल्लाे २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी मृत्यु र संक्रमण इटालीमा भएकाे छ । २४ घण्टामा इटालीमा ३४५ जनामाे मृत्यु भएकाे छ भने १ हजार १७८ मा संक्रमण भएकाे छ ।
पछिल्लाे २४ घण्टामा मृत्यु र संक्रमण हुने देशकाे दाेस्राे नम्बर स्पेन र तेस्राे नम्बरमा इरान परेकाे छ । स्पेनमा १९१ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने १ हजार ८८४ जनामा संक्रमण भएकाे छ । इरानमा १४५ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने १ हजार १ सय ७८ जनमा संक्रमण भएकाे छ ।
२४ घण्टामा चीनमा ११, जर्मनीमा ९, फ्रान्समा, २७ दक्षिण काेरियामा, ९ अमेरिकामा २९, स्विजरल्याण्डमा ८, बेलायतमा १६, नेदरल्यण्डमा १९ र क्यानडा ४ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ ।
त्यस्तै मलेसिया, इजिप्ट, थाइल्यण्ड, इण्डाेनेसिय, सन मारिनाेमा २/२ जनाकाे मृत्यु भएकाे छ भने अष्ट्रेलियामा, स्वडेन, जापान, ग्रिक, ब्राजिल, पाेल्यण्ड, इराक, भारत, लेवनान, टर्की, अल्जेरिया, माेराेक्काे र युक्रेनमा १/१ जनाकाे मृत्यु भएकाे वर्ल्डो मिटरर्स डट इन्फोले जनाएकाे छ ।
चीनको हुवानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थत् कोभिड-१९ अहिले विश्वको १६५ देशमा फैलिएको छ
प्रकाशित मिति ५ चैत्र २०७६, बुधबार ०४:२३